Macdan qodayaasha Sudan oo caafimaadkooda halis u galiya dahabka | Universal Somali TV
Macdan qodayaasha Sudan oo caafimaadkooda halis u galiya dahabka
December 28 2016 14:47:43
kiimikada sunta ah ee loo isticmaalo in lagu soo saaro dahabka ee goobaha macdanta laga soo saaro dalka Sudan ayaa kaliya aan wax yeeleenin caafimaadka macdan qodayaasha, laakiin sidoo kale kuwa u dhow ama ku nool agagaarka.
Shaqaalaha macdanka ee miyiga Sudan ayaa isticmaalaan kiimikada dareeraha mercury iyo tan cusba ahaanta ah ee cyanide si ay u kala saaraan dahabka. Mustafa Abdulgadir, qode dahabka ah, ayaa sheegay inay ogyihiin in kiimikada mercury ay isaga dilo karto.
"aniga kama shaqeeyeen halkaan hadaan heli karo shaqo kale, laakiin tani waa shaqada kaliya aan haysto," ayuu u sheegay Abdulgadir warbaahinta Al Jazeera. "isagoo intaa raaciyay in marka ay gubayaan dahabka qiiqa uu iyaga saameeyo. Waana sababta aan u isticmaalayo safaleetigan, laakiin weli way i saameeysaa ayuu yiri."
Basheer Elkhazim, dhakhtar maxaliga ah ee Ebeidiya, ayaa sheegay in uu daweeyo bukaanka qaba xanuunka ka qaado maalin walba.
Celcelis ahaan, waxaan arkaa saddex xaaladood oo sumowga meerkurida ah maalintii; saddex kiis oo sunta rasaasta, iyo ilaa sideed bukaanka qaba cudurada xabadka.
Sudan ayaan awoodin in ay joojiso soo saarka dahabka madaama ay taasi dhaawici doonto dhaqaalaha horey u liitay. Saraakiisha ayaa sheegay in ay ka warqabaan khataraha caafimaad islamarkaana ay ka shaqaynayaan baabi'inta isticmaalka mercury 2020.
Kan-xigaGabadhii Nigerianka ee ku dhex noolee...
Kan-horeMadaxweynaha Romania oo diiday mushar...
33,284,457 unique visits